Written by Abdi Mohamoud Handulle.
Macaan iyo qadhaadh er en dikt som ble oversatt engelisk og norsk
Gabaygan waxaa tiriyey abwaankii weyna alla ha u naxariistee Ahmed Ismaaciil Diiriye(Qaasim). Waa gabay aqoonweyne ku dheehantahay oo tilmaamaya in aan la malaynkarin binu adanka.
Sannad kasta bisha disembar waxaa la xus loo sameeyaa maalinta kristanka (jul). Maalintan waa maalin loo dabaal dego xuska dhalashadii Nabi Ciise sida ay aaminsanyihiin masiixiyiintu. Krismaska iyo u dabaaldega maalinta waa ciid muhiim ah dadka wadankan sida ay muslimka muhiimka ay ugu tahay ciidaha fidriga iyo carafaddu, waan maalin reerka oo dhan ay dabaaldegaan.
Xaaji Dallaayad(dikt med spørsmålet)
Gabaygan wuxu Xaajji Dallaayad ka cabanaya ninkii kibirka badnaa ee la odhan jiray Carab Dheere, ee uu Ismaaciil Mirana gabayga u tiriyay ayuu isna gabaygan u mariyay. Ninka waxa la odhan jiray Maxamed Xassan oo dalka Ingriiska wax ku soo bartay booliisna u ahaan jirey isticmaarkii Ingiriiska ee fadhiyey magaalada Hargeysa sanadkii, 1956 kii
Written by Osman Aden.
Casharka: Olavkii karaamaysnaa
Yoolka: In ardaygu ka sheekayn karo Olavkii karaamaysnaa.
Faahfaahin: Casharku waa cashar laba luqadood ah, waxana uu ka koobanyahay qoraal, su,aalo, liis-erayeed iyo cod. Waxaanu ku haboonyahay ardeyda dhigata fasalada 1.-4.
Aaminsanaanta aragtida bani, aadminimo
Boolobooladii foosha xumayd